Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Wargaysyada Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Khamiis Ah. - Gool24.Net
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Iyo Waxyaabihii Ay Wargaysyada Yurub Ka Qoreen Maanta Oo Khamiis Ah.
Shabakada Gool24 oo aad uga barateen in ay marakasta si joogto ah idiinla socodsiiso wararka suuqa ayaa halkan idiinku soo ururisay wararkii ugu danbeeyay ee suuqa iyo waxyaabihii ay maanta oo Arbaca ah ka qoreen xidigaha la kala doonayo.
Xidiga kooxda Chelsea ee Davide Zappacosta ayaa dib ugu laabanaya Talyaaniga iyada oo kooxda Roma dalab ka soo gudbisay si ay Serie ugu celiso Zappacosta .
Matthijs de Ligt ayaa lagula taliyay in uu iska diido Manchester United si uu ugu biiro kooxda uu saaxiibkiisa Hooland ee Van Dijk ka tirsan yahay ee Liverpool.
Tottenham ayaa dalab £40m ah ka gudbisay xidiga kooxda Roma ee Nicola Zaniolo.
Barcelona ayaa la sheegay in ay liiska ciyartoyda ay suuqa ka doonayso ku darsaday difaaca kooxda Arsenal ee Sead Kolasinac kaas oo ay suurtogal tahay in ay xagaagan la soo saxiixan karto.
Xidiga Barcelona amaahda kaga maqan ee Andre Gomes ayaa dariiqa u xaadhay in uu heshiis rasmi ah ugu biiro kooxda uu haddaba la soo joogay ee Everton kadib markii uu iska diiday dalabkii uga yimid West Ham.
Antonio Conte ayaa bartilmaameedkiisa ugu sareeya ka dhigtay Gareth Bale si uu xidiga Madrid ku dhibtoonaya u keeno kooxda Inter Milan.
Real Madrid ayaa diyaar u ah in ay dhegaysato dalabyada lagu doonayo xidiga reer Spain ee Isco iyada oo Zinedine Zidane uu isku dayayo in uu meelo u baneeyo ciyaartoyda cusub ee uu doonayo in uu kooxdiisa ku soo xoojiyo.
Manchester City oo wali suuqa ugu jirta ciyaartoy cusub ayaa hada ka cabsi qabta in ay UEFA kala kulanto ganaax culus oo xataa looga ganaaxayo Champions League laakiin City ayaa diyaarsanaysa qorshe sharci oo ay UEFA kula dagaalamayso.
Wararka Suuqa The Times
Paris Saint-Germain ayaa dalab ka gudbinaysa goolhayaha Manchester United ee David de Gea kadib markii ay kooxda reer France si rasmi ah ugu dhawaaqday in goolhaye Gianluigi Buffon uu si xor ah ku bixi doono.
Tottenham ayaa dalban doonta lacag ka badan £100m si uu kooxdeeda uga bixi karo Christian Eriksen kadib markii uu saxaafada mariyay fariinta uu ku shaaciyay in uu diyaar u yahay in uu ka baxo Spurs.
Manchester United ayaa saxiixa kowaad ee kooxdeeda xagagaan ka dhigan doonta xidiga kooxda Sporting iyo xulka qaranka Portugal ee Bruno Fernandes kaas oo noqon doona xidiga heshiiskiisa loogu hor dhawaaqi doono.
Arsenal ayaa daawanaysa Dayot Upamecano laakiin difaaca kooxda Barcelona ee Samuel Umtiti ayaa wali ah bartilmaameedka kowaad ee uu tababare Unai Emery xagaagan leeyahay.
Barcelona ayaa iska diiday fursada ay kula saxiixan kartay xidiga ay dhawaan Real Madrid heshiiskiisa ku dhawaaqday ee Luka Jovic.
Xidiga shaaciyay in uu xagagaan ka baxo kooxdiisa Crystal Palace ee Wilfried Zaha ayaa amakaag ka qaaday xadiga cunsuriyada uu kala kulmo kubbada cagta isaga oo shaaciyay in markaastaba loogu yeedho erayo ay ka mid yihiin daayeer.
Wararka Wargaysada Kale ee Yurub Iyo Waxay Suuqa Ka Qoreen:
Kooxaha Chelsea iyo Real Madrid ayaa heshiis ka gaadhay iibka Eden Hazard kadib markii ay labada kooxood xal u heleen farqigii lacageed ee u dhexeeyay waxayna Blues heli doontaa lacag 100 milyan yuro ah. (Guardian)
Difaaca dhexe ee kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk oo 27 sano jir ah ayaa doonaya in uu heshiis cusub oo waqti dheer ah u saxiixo kooxdiisa Reds.(ESPN)
Xidiga kooxda Borussia Dortmund ee Mario Gotze oo lala xidhiidhinayay Arsenal ayaa heshiis cusub u saxiixi doono kooxdiisa. (Bild)
Xidiga Arsenal diirada u saaran ee ka tirsan kooxda Sampdoria ee Dennis Praet oo 25 sano jir ah ayaa loo sheegay in uu xagaagan ka bixi karo kooxdiisa Sampdoria (HLN)
Kooxaha Arsenal, Man United iyo Tottenham ayaa xiisaynaya xidiga kooxda Stuttgart eeOzan Kabak iyada oo 19 sano jirkan reer Turkey lagu qiimaynayo £13.2m (Express)
Man United ayaa maanta tijaabada caafimaadka marinaysa xidiga kooxda Swansea City ee Daniel James kaas oo ay hadda qarka u saaran tahay in ay heshiiskiisa ku dhawaaqdo. (Telegraph)
Samuel Umtiti ayaa si cad kooxdiisa Barcelona ugu sheegay in aanu meena uga socon Camp Nou isla markaana uu kooxda sii joogayo inkasta oo kooxo badan lala xidhiidhinayay. (Marca)
Real Madrid aya wali isha ku haysa saxiixyada xidiga reer France ee Kylian Mbappé iyo Paul Pogba iyada oo wali uu socdo hawlgalka Madrid ay suuqa ciyaartoy muhiim ah kaga doonaysaa. (L’Equipe)
Liverpool ayaa kooxda Cardiff City wax ka waydiisay goolhayaha Neil Etheridge iyada oo Simon Mignolet ay suurtogal tahay in uu xagaagan ka bixi doono Anfield. ( Wales Online)
Napoli ayaa soo diiday dalab 60 milyan gini ku qiimaysnaa oo ay PSG ka soo gudbisay xidiga Allan (Corriere dello Sport)